ရင်ပူတာကို သက်သာစေဖို့ အစားအသောက်၊အနေအထိုင်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးစင်တာ » နာကျင်မှုသက်သာစေမယ့်နည်းလမ်းများ » ရင်ပူတာကို သက်သာစေဖို့ အစားအသောက်၊အနေအထိုင်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ
ရင်ညွန့်နေရာလောက်မှာ မီးစနဲ့ ထိုးထားသလို ပူနေတာမျိုး ဖြစ်ဖူးပါသလား။ အများအားဖြင့် ထမင်းတွေအများကြီး စားပြီးချိန်မှာ ဒါမျိုးဖြစ်လေ့ရှိပြီး တော်တော်နဲ့လည်း မပျောက်သွားပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး ပူနေတာကို အစာချေရည်ဆန်တက်ခြင်းကြောင့် ရင်ပူတာ လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ရင်ပူတာဟာ အစာစားပြီးနောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲက အစာတွေ အပေါ်ကို ဆန်တက်ပြီး အစာရေမြိုထဲရောက်ရှိကာ ရင်ညွန့်ရိုးအနောက်နားလောက်မှာ ပူနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်အစာမြိုချတဲ့အခါ အစာရေမြိုကြွက်သားတွေဟာ ဖြေလျှော့ပေးပြီး အစာတွေကို အစာအိမ်ထဲ ဆင်းသွားစေပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ အစာတွေ အပေါ်ကို ဆန်တက်လာမှာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကြွက်သားတွေကို ပြန်ညှစ်ပြီး တင်းထားလိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါ ကြွက်သားတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထိခိုက်ပြီး ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့အခါ အစာချေရည်တွေ ဆန်တက်တာ အလွယ်တကူ ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။
ရင်ပူတာဟာ ဘယ်သူမဆို ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတယ် ဆိုပေမယ့် ဆေးကုသဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပြင်းထန်ဆိုးရွားသော ပြဿနာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရင်ပူတာဟာလည်း မကုဘဲ ပစ်ထားလို့ရတဲ့ ကိစ္စတခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကာလရှည်ကြာစွာ ခံစားနေရပြီး မကုသဘဲ ထားမယ်ဆိုရင် အစာအိမ်ထဲက အက်ဆစ်ရည်တွေဟာ အူနံရံလမ်းကြောင်းတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံတွေကို ပြောင်းလဲခြင်းဟာ ရင်ပူတာကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် အလွယ်ဆုံးသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ သင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ပိုဆိုးစေတဲ့ အရာတွေ၊အစားအစာတွေနဲ့ အပြုအမူတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရင်ပူတာကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ စားသောက်နေထိုင်မှုတွေကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲ။
ရင်ပူတယ်ဆိုတာဟာ အစာအိမ်ကနေ စတဲ့ ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရင်ပူတာကို ရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် သင့်အစားအသောက်တွေကို ပြောင်းလဲရပါမယ်။ အဓိကသော့ချက်က အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ဖိအားတွေ များမလာစေဖို့ဖြစ်ပြီး ရောဂါပိုဆိုးစေတဲ့ အစားအသောက် နဲ့ အပြုအမူတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
· ထမင်းအများကြီး မစားပါနဲ့။ မြန်မြန် မစားပါနဲ့။ တခါစားရင် နည်းနည်းချင်းစီပဲ စားပါ။ ဒါမှသာ အစာစားပြီးတဲ့အခါ အစာအိမ်ထဲမှာ အစာအနည်းငယ်သာ ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး အက်ဆစ်တွေ ပြန်ဆန်တက်တာကို လျှော့ချပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
· အက်ဆစ်ပြန်ဆန်တက်တာကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေကို စာရင်းလုပ်ထားပါ။ ဒါမှသာ သူတို့ကို ရှောင်ကျဉ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အစားအစာတွေကတော့ ကြက်သွန်နီ၊ပူဒီနာ၊ချောကလက်၊ကော်ဖီ၊ချဉ်တဲ့အသီးတွေ၊အသီးဖျော်ရည်တွေ၊ခရမ်းချဉ်သီး၊အဆီအဆိမ့်တွေ နဲ့ အပူအစပ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
· ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ အရက်ကို အနည်းငယ်ပဲ သောက်ပါ။ ဆေးလိပ်နဲ့ ဆေးရွက်ကြီးမှာ ပါဝင်တဲ့ နီကိုတင်းဓါတ်ဟာ အစာရေမြိုကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် အစာအိမ်ထဲက အက်ဆစ်တွေအနေနဲ့ အစာရေမြိုထဲကို လွယ်ကူစွာ ဆန်တက်ပြီး ဝင်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
· ဗိုက်ကို အရမ်းကြီးဖိမထားမိပါစေနဲ့။ ဆိုလိုတာက သင့်အနေနဲ့ အဝတ်ကြပ်ကြပ်တွေကို ရှောင်ကျဉ်ပြီး ပွပွချောင်ချောင် အဝတ်အစားတွေကိုပဲ ဝတ်သင့်တယ်လို့ ဆိုတာပါ။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်အလေးချိန်ချဖို့လည်း ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ဒါမှသာ အစာအိမ်ပေါ် ဖိထားတဲ့ ဖိအားတွေ နည်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဝလာလေလေ အစာအိမ်နဲ့ အူတွေပေါ် ဖိထားတဲ့ ဖိအားများလေလေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
· အစာစားပြီးပြီးချင်း လှဲအိပ်တာကို ရှောင်ပါ။သင့်အစာအိမ်ဟာ ရေဗူးဖြစ်တယ်လို့ သဘောထားလိုက်ရင် ရေဗူးကို လှဲထားလိုက်တဲ့အခါ ရေတွေထွက်ကုန်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကို မြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ခေါင်းအုံးမြင့်မြင့်ကို အုံးပြီး သင့်ခေါင်းကို ခန္ဓါကိုယ်ထက် အနည်းငယ် မြင့်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါစေ။ ဒါမှသာ အက်ဆစ်တွေ ဆန်တက်တာကို ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ ခေါင်းပိုင်းကို မြှင့်ထားတာ အလုပ်မဖြစ်ဖူးဆိုရင် ခါးနေရာလောက်ကစပြီး မြင့်မြင့်ထားကြည့်ပါ။
· လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်ခြင်းဟာ အစာကြေလွယ်စေပါတယ်။ အလှုပ်အရှားနည်းရင်တော့ အစာချေရတာ ကြာမြင့်တဲ့အတွက် ရင်ပူတာကို ပိုဆိုးစေပါလိမ့်မယ်။ လမ်းလျှောက်တာ၊ရေကူးတာ၊ယောဂကျင့်တာ စတဲ့ သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
· ဝလာတဲ့အခါ သင့်အစာအိမ်နားတဝိုက်ကို ဖိအားတွေ ပိုများလာစေတဲ့အတွက် သင့်တော်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းထားပါ။ ဖိအားတွေများလာရင် အစာချေရခက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဝနေပြီဆိုရင် ဝိတ်ချဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲပါတော့။
· ထမင်းစားပြီးတိုင်း ရေတခွက်အနည်းဆုံးသောက်ပါ။ ဒါမှ အစာရေမြိုထဲမှာရှိတဲ့ အက်ဆစ်တွေကို ဆေးချပစ်လိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
· အရက်နဲ့ ဆေးလိပ်ကို ရှောင်ပါ။ အစာမစားခင်၊စားနေတုန်း နဲ့ စားပြီးချိန်တွေမှာ အရက်နဲ့ ဆေးလိပ်တွေကိုရှောင်ရမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အစာအိမ်ထဲက အစာနဲ့ အက်ဆစ်တွေ အပေါ်ကိုပြန်ဆန်တက်မလာအောင် ထိန်းချုပ်ပေးထားတဲ့ အစာရေမြိုဆန့်ကျုံ့ကြွက်သားကို ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်တွေက အားနည်းစေတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
· ပီကေဝါးပါ။ပီကေဝါးခြင်းဟာ အစာချေခြင်းကို အားပေးပါတယ်။(ပူဒီနာ အနံ့အရသာမပါတဲ့) ပီကေတွေကို ဝါးပေးမယ်ဆိုရင် တံတွေးထုတ်လုပ်မှုကို များစေတဲ့အတွက် အစာအိမ်ထဲက အစာတွေ အူသိမ်ထဲမြန်မြန်ဆင်းသွားအောင် အားပေးကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်တံတွေးမှာ အက်ဆစ်တွေကို ဓါတ်ပြယ်ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ အယ်လ်ကာလီဓါတ်တမျိုး (bicarbonate)လည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။
ရင်ပူတဲ့ဝေဒနာဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် အန္တရာယ်မရှိဖူးဆိုပေမယ့် အခြေအနေဆိုးလာရင် သင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာမှုကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်ဆေးစာမပါဘဲ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့ ဆေးတွေနဲ့ ကုသလို့ မသက်သာဖူးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပြီး ကုသမှုခံယူသင့်ပါပြီ။ သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ သေချာစွာစစ်ဆေးစမ်းသပ်ပြီး သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် ကုသမှုကို ပေးပါလိမ့်မယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 14, 2019
conditions/heartburn/basics/symptoms/con-20019545. Accessed September 10,
Heartburn: When Your Food Fights Back. https://www.elcaminohospital.org/stay-
healthy/blog/heartburn-when- your-food- fights-back. Accessed September 10, 2016.
Heartburn. http://www.rxlist.com/heartburn/drugs-condition.htm . Accessed
11 Meal Planning Tips to Prevent Heartburn. http://www.webmd.com/heartburn-
gerd/features/11-meal- planning-tips- prevent-heartburn. Accessed September 10,
ဘာတွေကများ ဓာတ်မတည့်မှု ကိုဖြစ်စေတာလဲ…….